La kulan – Gabadha Soomaaliyeed oo Maalinle ula nool Qur’aan Aqriska! | HimiloNetwork
La kulan – Gabadha Soomaaliyeed oo Maalinle ula nool Qur’aan Aqriska!
Posted by: Zakariya in Wararka June 19, 2017	0 554 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nasro Abdiraxman waxay si maalinle ah ula nooshahay Qur’an aqriska xilliyada aysan macduurka ahayn.
Previous: Muslimiinta LA oo Dib-jirta kaalmaynaya!
Next: 20 June – Maalinta Caalamiga ee Qaxootiga
Mexico – Marka Maayarku uusan gudan Waajibaadka loo igmado.
76-jir Maalin kasta Wiilkeeda Cuuryaanka ah Iskuulka ku geysa Gaarigiisa.
Maxay kaga gaar tahay Garanuugtu Ugaarta kale?!–Nolosha Garanuugta